SANTOSH PAUDEL'S BLOG : गोसाइकुन्ड उडान
कान्लो उक्लिएर अलिकति तेर्सो हिडेपछि गोरेटो बाटो छेकेर टागेको होर्डिङ्ग बोर्डमा होटेलको नाम टल्कियो ।
हामी तिनै एकैचोटी चिच्यायौँ—— "हिमचिम रेष्टुरेण्ट"
बासले बारेको सानो टहरो जस्तो होटेलको कुनापट्टी चुलाबाट दोर्जे केटो गुनगुनाउँदै थियो ।
स्यो-स्योको गन्ध नमिठो
शेर्पीनी दिदि क्या ! मिठो
हामी भर्खर धुन्चेबाट सिङ्गोम्पा पुगेका थियौँ । घाम टाउँकै माथि थियो । समय १२ मा चल्दै हुनुपर्छ । मैले अनुमान लगाए । ६ घण्टाको निरन्तर हिडाईपछि बल्ल होटेल भेटेथ्यौ ।
दशैको बेला । घर जान उर्लिएका मान्छेको बाक्लो चाप । काउन्टर वरिपरि टिकट लिनेको भिड ।
लाग्थ्यो—— "कुनै ठुलो महोत्सव हुँदैछ ।"
गाडी खचाखच हुनेमा कुनै शंका थिएन । सिट पाउने त झन् चान्सै थिएन ।
अनकनाउँदै तीनैजना काउन्टर अगाडी रोकिएको एउटा पुरानो बसमा ठेलमठेलमै चढ्यौँ ।
बसको अगाडिपट्टी लेखिएको थियो—— "हिमाल-पहाड-तराई, कोहि छैन पराई"
हामी पनि कहाँ पराइ थियौँ र ? खुट्टा राख्ने ठाउँ पाइहाल्यौँ, चढ्यौँ ।
चढेको केहि क्षणमा बस करिब ४० जना बोकेर हर्न बजाउँदै हुइकियो—— "धुन्चेतिर"
बल्ल मन चङ्गा जस्तै हलुङ्गो भयो ।
चिन्ताको अग्लो पहाड नाघेको बेला मान्छेको अनुहारमा जसरी खुशी दौडिन्छ, त्यस्तै बेजोडको खुशि अनुहारमा बेतोडले दौडियो । मैले आरामको लामो साँस ताने ।
बसको पछाडि भागमा उभिएको छु—— "म"
छेउमै उभिएर मोबाइलमा 'हे कविरा' सुन्दै गरेका दुई छन्—— "हेम र अनिश"
घटस्थापनाको अघिल्लो दिन हुनुपर्छ । फेसबुकमा अनिशको म्यासेज झर्यो । यसपालि गोसाइकुन्डको ट्रेक—— "ह्वाट यू से ब्रो"
मनमनै म्यासेज पढे र फिस्स मुस्कुराए ।
दुई दिन अघि थापेको तलब गोजिबाट सिनित्त भईसकेको थियो । एक टुक्रा काम नलाग्ने कागज सिवाय गोजिमा केहि थिएन ।
अनिशको म्यासेज पुनः एकपटक पढ्दै गोजिबाट त्यहि कागज निकाले । बाले टिपाएको गाउँको सिडिएमएको नम्बर थियो त्यो । एकपटक बालाई सम्झे । आमालाई सम्झे । साथिभाई सम्झे । गाउँघर सम्झे । गोसाइकुण्डको ट्रेक पनि सम्झे । अचानक मन त्यसैत्यसै चुस्स दुख्यो ।
फेरि अनिशकै म्यासेज आयो । "टुमरो, गोसाइकुण्ड ट्रेक, ह्वाट यू से ब्रो ।"
ऐले भने कन्पारो तातेर आयो । तैपनि अल्छि मान्दै रिप्लाई पठाए— "हेरम" ।
"के हेरम, खुरूक्क हिड्ने । पैसोसैसो छैन भने व्यवस्था गरौला ।" रिप्लाई पढेर मन ढुक्क भयो र अचानक शहरीभरी खुशी यसरी दोडिन थाल्यो मानौँ खुशी मापन गर्ने कुनै यन्त्र हुँदो हो त त्यसले आकाश छुन्थ्यो होला ।
जबजब म पैसाको अभावका पहाडले थिचिन्थे, सहयोग गर्ने उहि हुन्थ्यो । र यसपालिको गोसाइकुण्डको ट्रेकिङ्ग खर्च पनि उसैले व्यहोर्ने भयो । म खुशि थिए । किनकी केहि वर्षदेखि दशैमा ट्रेकिङ्ग जाने निरन्तरतामा मेरो उपस्थिति हुँदै थियो, म छुट्दै थिइन ।
बसले काठमाण्डौँ छाडेको घण्टौ भईसकेको थियो । विदुर पुग्न लागेका थियौँ । बस त्रिशुलि नदी मास्तिरको भिरमा हुइकिदै थियो । हेमले वमिट गर्यो । उभिन निको नमानेपछि हामि छततिर उक्लियौँ ।
"वाऊ ! ह्वाट अ बिउटिफुल नुवाकोट ?"
"त्रिशुलीको सङ्ग्लो पानी, मनै बहलाउने,
त्यसैत्यसै बगे म त, कता समाउने ?"
निन्याउरो हेम एकाएक गुनगुनायो ।
"सैयौँ मान्छे वेपत्ता बनाउने त्रिशुलीमा मनमनै भएपनि नबग है केटा । के था पत्तै नपाई तँलाई पनि बेपत्ता बनाउला——मनमनै ।" म जिस्किए ।
"छ्या, भाइहरू जे पाए त्यहि नभन्नु न ! डर लाग्यो हौँ कुरा सुनेर ।"
छतको अघिल्तिरबाट अपरिचित शेर्पिनी केटीको आवाज सुनेर हामि त्यतै फर्कियौँ ।
"जिस्केको नी", एकैचोटी तीनैजनाले मुन्टो हल्लाउँदै हास्यौँ ।
"शेर्पिनी केटीले आँखा तर्दै निकैबेर हामितिर नमिठो मुस्कान फालीरही र हामि तीनै उसको नमिठो मुस्कानमा निकैबेर कठ्याङ्ग्रिरह्यौँ ।
कुरैकुराको सुरमा विदुर आइपुग्यो । शहरको पल्लो कुनामा पुगेर गाडी घ्याच्च रोकियो ।
खाना खुवायो र गाडि हुइकियो । के गाडी मात्र हुइकिन्थ्यो—— हामि पनि । उही उत्साह । उहि उमंग । उहि खुशि । उहि उत्सुकताका साथ हामी छतबाट नुवाकोट नियाल्दै धुन्चेतिर हानिदै थियौँ ।
त्रिशुलिका विशाल फाँट । बाटै मुन्तिर नहरमा बगेको सेतो पानी । फुलबुट्टे पक्की घरहरू । झुरुप्प पहाडका फेदमा बनेका स-साना बस्ती । लाग्थ्यो— कुनै स्वर्ग भन्दा कमको दृश्य थिएन त्यो ।
अग्लो पहडाबाट झर्दै गरेको विशाल झर्नाले केहि बेर सबैको ध्यान खिच्यो ।
"विउटिफुल", छतको देब्रेपट्टीबाट एउटा कुइरे जोडजोडले चिच्यायो । झन् हामी नचिच्याउने कुरै थिएन ।
विदुरबाट झण्डै ५ घण्टाको यात्रापछि विशाल पहिरो गएको छेउको डाँडामा पुगेर गाडि रोकियो । पहाडै बगाएर राजमार्गमा सानो थुम्का खडा भएको थियो । सबै गाडीहरू जाममा लस्करै थिए ।
हामि ओर्लियौँ । पहिरो देख्यौँ । बस् मुटु नहल्लिने कुरै थिएन ।
"दिनहुँ यस्तो पहिरोमाथि गाडी हाक्ने चालकहरूको मटु चै मान्नैपर्छ ।" अनिशले डाइभरदाईहरूको मन जित्ने कुरा गर्यो । केहि डाइबरदाइहरू मुसुमुसु निकैबेर हाँसिरहे ।
धुन्चेबाट एक हुल आर्मी आए । बाटो खोल्न लागे । निकै समय लाग्ने थाहा पाएपछि हामिले हिड्ने सुर कस्यौँ । सबैले आ-आफ्नो झोला टिप्यौँ र त्यहाँबाट हिड्यौँ ।
"धुन्चे, १२ किलोमिटर", जिब्रो टोक्दै अनिश फुसफुसायो ।
"असम् ट्रेकिङ्ग हुने भो", एकाएक हेम रौस्सियो ।
"१२ कि.मी", नट अ जोक साथि, भोलिको बसाई धुन्चे गर्ने भए ठिकै छ ।" पुच्छारमा मैले राय सुझाए ।
"जे पर्ला सोहि टर्ला", अनिशले साहस देखायो । किनकी हामी तीनमा अनिश मात्र हिडाईमा निर्धो थियो ।
ऊसले हिड्ने साहास देखाएपछि मनोबल हाम्रो पनि उच्च भयो । हामी पिचको बाटैबाटो टुकुरटुकुर हिड्न थाल्यौँ र परिचित हुनथाल्यौँ— अपरिचित अनुहारहरूसँग, स-साना झुप्रा घरहरूसँग, चिसो हावासँग, घना जङ्गलहरूसँग र जताततै मधुर आवाजमा झरिरहेका झर्नाहरूसँग ।
"वाऊ ! आई थिङ्क, ईट्स कल्ड ह्याभेन", अनिश हात फिजाउँदै चिच्यायो ।
"ह्वाट, इट्स अ नेपाल ड्युड । सो, इन्ज्वय इट लाइक वुइ र इन ह्याभेन", हेमले अनिशलाई जिस्काउदै सानो दहमा फुत्त पस्यो ।
हैन के भन्छन् केटाहरू। "इट्स अ फस्ट रसुवा ड्युड । सो, उइ आर इन लाइक अ हेभेन अफ नेपाल", म जानिटोपलिदै झर्नाको छेउमा उभिएर सेल्फि खिच्न थाले ।
"हाहाहा हामी तीनै मज्जाले निकैबेर हास्यौँ", सम्भवत: हाम्रो हाँसोमा कस्तुरीहरू पनी मज्जाले हाँसे होलान् । थुम्कापट्टीबाट डाँफेले हाम्रो मुस्कान देख्यो होला । कालिजका केहि बथानहरू हाम्रो हाँसो सुनेर तर्सिदै भागे होलान् । म त्यसैत्यसै कल्पिए ।
ढुङ्गो छलेर झरेको बिशाल झर्नाले बनाएको अर्को ठुलो दहमा तीनै टक्क अडियौँ ।
"हेल्लो भन्दै एक जोडी क्यानेडियन हामीतिरै आए"
"यु अल गोइनङ्ग धुन्चे"
"एस, हामीले एकै स्वरमा बोल्यौँ"
"एण्ड यू अल्सो", अनिशले क्यानेडियनको मुखबाट 'एस' खस्न नपाउँदै सोधिहाल्यो ।
हामीलाई थाहा थियो । कुइरे देख्नासाथ यो हिमचिम हुन्छ भन्ने कुरा । किनकी तुलनात्मकरूपमा उसको अंग्रेजी हाम्रो भन्दा राम्रो थियो र मष्तिष्कमा जो बिबिसिमा काम गर्ने भुत सवार थियो उसको ।
लौ त, आजलाई उसले काम पायो । कहाँ ? बि.बि.सि.मा, होइन-होइन रसुवामा ।
हामी तीनबाट पाँच भयौँ । बाटाभरी क्यानेडियन जोडीले धेरै कुरा गरे । भुतको कथा सुनाए । क्यानडा र नेपालको बारेमा गफ पिटे । प्रेम कहानी सुनाए । धैरै देशको यात्रा वर्णन गरे । हामीले सुनिदिने कष्ट गर्दियौँ । र, अन्त्यमा उनीहरू यात्राभरका आत्मिय साथी बन्न पुगे । फेसबुकमा जोडिए । कन्ट्याक्ट साटासाट भयो । यतिसम्म कि क्यानडा गएको बेला उसको घर पस्ने निम्तो समेत पाइयो ।
कुनै दिन क्यानडा पुगियो भने पाहुना भएर बस्नलाई पिटरको घर पनि मिल्यो । धुन्चेले दुनियाभरको बास मिलाउने भयो । हामी एकअर्कालाई हेर्दै मुस्कुरायौँ ।
कतिखेर चारवटा पहिरो छाडियो ? १२ किलोमिटर कसरी हिडियो ? केहि पत्तै भएन ।
"धुन्चे १ कि.मी.", बाटो मुन्तिर तितेपातिको झ्याङ्गनिर टागेको होर्डिङ्गबोर्ड देखेपछि बल्ल हामीले लामो साँस फेर्यौँ । त्यतिबेला बेलुकाको ९ बजेको हुनुपर्छ ।
"धुन्चे, हामी आइपुग्यौँ ।" हामी तीनै एकछिनसम्म मज्जाले चिच्यायौँ ।
हाम्रो चिच्याहट देखेर जोडी क्यानेडीयन छक्क परे । अनिशले अंग्रेजीमा सुझायो— हामीले आफैले आफैलाई स्वागत गरेको क्षण न थियो त्यो ।
भिरालो खर्क तर पहाडको फेदपट्टीको खोप्चातिर झुरूप्प स-साना पक्की घर । बानेश्वरबाट बबरमहल जत्ति लामो रोडको छेउछाउमा बनेका घर, भनौँ— बजार । रोड गाउँघरका आँगन जस्तो ।
हामी हतारिदै सस्तो र राम्रो हेटल खोज्न थाल्यौँ । ती जोडी क्यानेडिएन पनि हाम्रै पछिपछि थिए । हामी रोडको माथिल्तिर रहेको अन्नपूर्ण होटेलमा छिर्यौँ । क्यानेडियनहरू कता गए । थाहै भएन ।
"रूमको कति ?"
"सात सय", जुङ्गेवाला साउले चर्को स्वरमा भाउ तोक्यो ।
"६ सय दिन्छौँ" अनुहार चिम्स्याउँदै म बोले ।
"हुन्छ को मुन्टो हल्लाउँदै" जुङ्गेवाला साउले सहमति जनायो ।
हामी तीन डङ्ग्रङ्ग बेडमा पल्टेका मात्र के थियौँ ? अघिको क्यानेडियन बुढो झुल्कियो र मुस्कुराउँदै—— "हाउ मज कस्ट यू गिवेन फर दिस रूम"
"ह्वाट, यो शहरकै सबैभन्दा राम्रो होटेल लाङ्गटाङ्गमा हामीले पर रूम ३०० सय रुपैया तिर्यौ", हिड तिमीहरूलाई पनि मिलाइदिउला", हामी ट्वा पर्यौँ । एकअर्काको मुखामुख गर्दै तुरून्त झोला प्याक गर्यौँ र त्यस होटेलबाट निस्कियौँ"
डराईडराई छिरेको लाङ्गटाङ्गको रूम हेरिसकेर पैसोको चाँजोपाँजो मिलेपछि तीनैजना दंगदास पर्यौ । हो पो रहेछ । कहाँ नेपाली मात्र आत्मिय र सहयोगि हुन्छन् । मान्छे न हुन् चाहे ती अमेरिकन हुन् वा क्यानेडियन । आत्मियता साटासाट भन्ने कुरा त संसारका कुनै पनि कुनाका मान्छेले गर्दो रहेछ । त्यो दिन हामीले थाहा पायौँ ।
हामी जोडी क्यानेडियनको व्यवहारप्रति आभारी थियौँ । र, त्यो भन्दा बढी खुशी । त्यस दिन हाम्रो बसाई त्यहि होटेलमा भयो । रात्रि भोजको साथि भए ती क्यानेडियन जोडि ।
खोचबाट उक्लिएर हामी तिन टक्क उभियौँ ।
छर्लङ्ग देखियो—— "हिमाल डिस्ट्रिलरी पानीको फ्याक्ट्री"
गज्जप, तिनै जनाले एकअर्कालाई थम अप्स गर्दै अगाडी लम्कियौँ ।
हिलो बाटो कटेर पुल तर्नै लाग्दा एक भाई भेटियो ।
"भाई, गोसाइकुण्ड पुग्न कति समय लाग्छ ?" अनिशले सोध्यो ।
"के तालको मान्छे होला ? १ कि.मी. हिडेको छैन" हेम रन्कियो ।
"बेलुकासम्ममा पुग्नुहुन्छ", भाइले हिड्न नसक्ने आशय बुझेछ क्यार ! साहस थप्दिने काम गर्यो ।
"झोलुङ्गे पुलको बीचमा पुगेर फोटो ठोकौँ त जेठान", हेमले मलाई फोटो खिचिदिन आग्रह गर्यौ या अनुरोध । साइनो पो लगाउन खोज्यो कि ? म अलमलिए ।
खैर, मैले फोटोहरू कैद गर्न लागे । खोलाको । जंगलको । हेमको । अनिशको ।
"खोइ त मेरो", म कड्किए ।
"यी मोबाइलमा" अनिशले देखाउँदै बोल्यो ।
"पोज त दिनै पाइएन", म हाँस्दै बोले ।
नाकै ठोक्केला जस्तो खुट्किलाको बाटो १ घण्टा लगाएर छिचलेपछि बल्ल हामी पहिलो स्टेशन पुग्यौँ—— देउराली ।
"चिया पिउने ?" हेमले हामी दुईलाई सोध्यो ।
"हुन्छ", मैले मुन्टो हल्लाउँदै लामो सुस्केरा छाँडे ।
चिया पिएपछि हामि पुनः उकालो लाग्यौँ । बाटाभरि कोहि इजराइली साथि बने । केहि जर्मनी । टन्नै स्पेनिसहरू पनि साथि भए । हाम्रो हिडाइ विदेशीहरूको भन्दा तगडा थियो । बाटाभरि भेटेजति सबैलाइ पछाडि छाड्दै हिडिरह्यौँ । नयाँनयाँ साथि बन्दै गए ।
मध्यदिनतिर सिङ्घम्पा पुगेथ्यौँ । उही दोर्जेका खाना खाएर लाउरे बिनायकतिर उक्लिएथ्यौँ ।
हामि करिब ३८ सय मिटर माथि थियौँ ।
लाङ्टाङ्ग हिमाल सामुन्ने उभिएको थियो । सुर्यको मसिनो पहेला धर्साले लाङ्टाङ्गको टुप्पो टल्काइरहेको थियो ।
लामो साँस फेर्दै अनिशले हिड्न नसक्ने बतायो । त्यतिबेला समय ५M३० मा चल्दै हुनुपर्छ र हामी लाउरेविनायक मुन्तिरको खोजमा थियौँ । होटल पुग्न अब मात्र केहि मिनेट लाग्न सक्थ्यो ।
"खानाको ३०० सय । कोठको छ सय ।" साउनी च्याट्ठिदै बोलि ।
लाउरे विनायकको डाँडामा एउटै होटेल । झन् त्यसमाथि विदेशीको खचाखच । खैर, बस्नु त पर्यो । साउनीलाई फकाउँदै एउटा रूम पक्का गर्यौँ र साँझ नपर्दै खाना खाइवरि एक थर्मस तातो पानि लिएर कोठा छिर्यौँ । रातभरि सुत्न के सकिन्थ्यो ? चिसो उत्तिकै । त्यहिमाथि अक्सिजन नपुगे जस्तो हुने, टाउको चिट्चिट् दुखिरहने । बेलाबेला डराउँदै हामी एक अर्कालाई उठाएर सोध्थ्यौँ— लेक लाग्यो भने...
आँगनको डिलमा मुख धुँदा पानि उछिट्टिएर लाङ्टाङ्ग हिमालमा पुग्ला जस्तो । विश्वासै नलाग्ने आँखै अगाडी सेतो टलक्क टल्केको अग्लो हिमाल ।
"यति नजिकबाट त मैले हिमाल देखेकै थिइन?" अनिश खुशिले गद्गद् भयो ।
"ग्रुपमा एक फोटो खिचि हालौँ", होटलको दिदीलाई फोटो खिच्न अनुरोध गर्दै हामी डिलमा उभियौँ ।
होटेलबाट उकालो लाग्दा बिहानको ९ बज्यो ।
गोसइकुण्डपट्टिको थुम्कोबाट उदाउँदै गरेको घामको फुर्केले छातिपट्टिको भाग तातो बनायो । जाडोले मुटु कमाइरहेको बेला उकालो चढ्न केहि राहत मिल्यो ।
डरलाग्दा भिर । घोडेटो—गोरेटो—ट्रेकिङ्ग जे भने पनि मसिनो धर्सा जस्तो खुट्टा मात्र अट्ने साँघुरो बाटो । चिप्ल्यो भने कहाँ हो कहाँ ? विना नशा सुरमा हिड्नु पर्ने । बेसुरा देखाए ज्यान जोखिमा । थुम्का भने गज्जपका । उजाड थिए । हिउ नभएका तर लस्करै ।
"काठमाण्डौँ कता पर्ला ?" हेमले प्रश्न गर्यो ।
"यता हुनुपर्छ हातले देखाउँदै अनिश बोल्यो"
"अनि, रामेछाप नी ?" मैले सोधे ।
"रामेछाप, एकछिन रोक्किएर काठमाण्डौबाट पूर्व पट्टी ।" अनिश जिस्कियो ।
झण्डै ४ घण्टाको हिडाइपछि हामि गोसाइकुण्ड पुग्यौँ ।
घाम लागिरहेको थियो । सिरौटे चिसो हावा चलिरहेको । तलतलबाट झुरुप्प बाक्लो बादल गोसाइकुण्डतिर उक्लिदै गरेको । कुण्डबाट तुवालो जस्तो बाफ उडिरहेको । मनमोहक दृश्य थियो त्यो ।
हिउँ नभएका थुम्काले घेरिएको ४३५० मिटर उचाइमा रहेको गोसाइ कुण्डको पानी सङ्ग्लो थियो । स-साना पत्थरैपत्थरको जमिन । कुण्डको चुम्सोपट्टी रहेको ४ वटा जत्ति होटल । होटल भएकै ठाउँको दाहिनेपट्टी मन्दीर ।
बस् गोसाइकुण्डको क्यानभासमा यत्ति दृश्य अटाउथ्यो ।
एउटा होटेलमा खाना अडर गर्यौँ र लाग्यौँ कुण्डमा डुब्न ।
अनिश पहिले डुब्यो । डुब्यो के भन्ने फुत्त पस्यो, हिऊ झै जमेर फुत्त निस्कियो । हतारहतारमा कपडा लगायो । हेमले त्यसै गर्यो र मैले पनि ।
कति चिसो पानी ? हामी तीनै एकछिन कठ्याङ्ग्रियौँ ।
मन्दिरको दर्शन गर्यौँ । जल बोक्यौँ । होटेलको तात्तातो खाना र तेलमा तारेको पिरो खुर्सानी चिरिप्प पारेर करिब आधा घण्टाको बिश्रामपछि तल झर्यौँ ।
त्यहिदिन बेलुका धुन्चे पुग्यौँ र बियरले हल्का शरिर ततायौँ । भोलि त सवेरै बडादशमीको आशिर्वाद र टिकाथाप्न काठमाण्डौँ जो फिर्किनु छँदैथियो ।
Posted by Santosh Paudel at 11:16 PM
Labels: Story of Travel